निकुञ्ज रक्षकलाई पाठ सिकाउन जरूरी – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
निकुञ्ज रक्षकलाई पाठ सिकाउन जरूरी
२०७१ जेष्ठ २६, सोमबार ०२:३१ गते
केही समयको अन्तरालपछि म माडी यात्राका लागि निक्लिएको थिए । माडीको आयोध्यापुरीसम्मको मेरो भ्रमणको उद्देश्य राजनीतिबाट प्रेरित थियो । माडीका चार गा.वि.स.मा उपभोक्ता समितिको लागि चुनावी माहोल तात्दै गर्दा मेरो माडी यात्रा त्यही उद्देश्यप्रति लक्षित थियो । चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी र पर्सा जिल्लाको केही भू–भागमा फैलिएर रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पार गरेर मात्र माडी पुग्न सकिन्छ । पर्सा जिल्लाको ठोरीबाट होस् या चितवनको जगतपुर, जुनै स्थानबाट माडी प्रवेश गरे पनि निकुञ्ज पार नगरी माडी पुग्न सकिँदैन । माडी र भरतपुरको बीचमा पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज मेरो मात्र होइन, माडीको यात्रा तय गर्ने धेरैका लागि डरलाग्दो र बोझलाग्दो कुरा हुने गर्दछ । हामी माडीवासीहरु माडी पुग्नका लागि निकुञ्ज पार नगरी नहुने एउटा बाध्यताबाट गुज्रिँदै आइरहेका छौँ । माडीवासीका लागि निकुञ्जको यात्रामा जंगली जनावरको भय र निकुञ्जका रक्षकको दुव्र्यवहार दुवै उस्तै डरलाग्दा र बोझलाग्दा विषय बन्दै आइरहेका छन् । निकुञ्जका रक्षक भनिएका सैनिकहरु निकुञ्जमा प्रवेश गर्नेहरु सबैसबैलाई निकुञ्जविरोधीकै रुपमा देख्ने गर्दछन् । निकुञ्जको दुवै छेउमा हुने चेक जाँचका क्रममा सुन्न र देख्न पाइने सैनिकको बोली व्यवहारले अझै पनि युद्धकालीन सयमको झझल्को दिइरहेको हुन्छ ।
निकुञ्जमा गण बदली भएसँगै मानिसले सवारीसाधन रोक्ने र चढ्ने ठाउँ पनि परिवर्तन हुने यो पहिलेदेखिकै चलन अब त निकुञ्जको नियमझैँ बनिसकेको छ । म यसपटक झन्डै साढे दुई महिनापछि माडी जाँदा पहिलाको गण परिवर्तन भएर अहिले श्री जंग गण आइसकेको रहेछ र त मोटरबाइक रोक्ने ठाउँ पनि परिवर्तन भैसकेको रहेछ । मैले सरसर बाइक पहिलाकै ठाउँमा लगेर रोकेपछि त्यहाँ ड्युटीमा रहेका सैनिकले आप्mनो रवाफ देखाउन थालिहाले । ड्युटीमा रहेका ती सैनिक जवान सम्पूर्ण निकुञ्ज नै आप्mनो निजी सम्पत्ति भएकोझैँ गरी रवाफ देखाउन थाले । उनी सामान्य मानवीय मर्यादाको पनि ख्याल नगरी असामान्य व्यवहार देखाइरहेका थिए । मलाई उनीसँग मज्जाले बाझाबाझ गर्न मन थियो । मलाई उनीजस्तै निकुञ्ज रक्षक र तिनका क्रियाकलापका बारेमा धेरै कुरा थाहा थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि म धेरै कुरा नगरी सरासर अगाडि बढेँ । मलाई थाहा छ, प्रमाण पु¥याउन नसकिने धेरै कुराहरु थाहा हुनु पनि थाहा नभएबराबर नै हो । मलाई धेरै कुरा गर्न मन लागेन । नीति–नियम र निकुञ्ज संरक्षणका बारेमा धेरै नै कुरा गर्न मन थियो, तर यसबारेमा सेनाको एउटा जवानसँग धेरै कुरा गर्नुको कुनै अर्थ थिएन । केही कुरा बुझेको म सेनाको एउटा जवानसँग विवाद गर्नतिर नलागी सरासर अगाडि बढेँ र मनमनमै धेरै कुरा खेलाउँदै अयोध्यापुरी पुगेँ अनि भोलिपल्ट भरतपुर फर्किएँ ।
हामी सवालको जवाफ गर्न आँट गर्नेसँग त सैनिक जवानको व्यवहार यस्तो छ भने अरु सर्वसाधारण माडीवासीलाई ती जवानले कति दुःख दिएका होलान् ? निकुञ्ज प्रवेशका क्रममा सैनिकबाट हुने चेक जाँचका बेला सैनिकले देखाउने व्यवहारबाट धेरै माडीवासी रूष्ट छन्, कोही पनि खुसी छैनन् । निकुञ्ज रक्षक सैनिकका जवानले प्रयोग गर्ने भाषा, शैली सुन्दा र देख्दा त उनीहरुसँग दोहोरो संवाद गर्न मन नै लाग्दैन ।
निकुञ्ज संरक्षणमा खटिने कर्मचारी, निकुञ्जआसपासका मानिस तथा निकुञ्जका वन्यजन्तुका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध रहेमा मात्र संरक्षणमा सफलता पाउन सकिने यथार्थ निकुञ्ज रक्षक सैनिकलाई बुझाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । सोझो तवरले यात्रा गर्दा समेत अपराधीले झैँ खप्की खानुपर्ने यो अवस्था रहेसम्म संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाको उत्साहपूर्वक उपस्थिति आश गर्न सकिँदैन । निकुञ्ज रक्षक सैनिक जवानको यस्तो व्यवहारले गर्दा सैनिक गणप्रतिको सम्मानमा नै कमी आउन सक्दछ । घरपालुवा जनावरहरु चरिचरन क्षेत्रमा पु¥याएको वा दाउरा, घाँसपात संकलन वा संरक्षित क्षेत्रमा आफूखुशी गर्न लागेको बेलामा फेला पारेको बेलामा झैँ गरी भाषा, शैली र सैनिक रवाफ देखाउने छूट ती सैनिकलाई कसले दिएको हो ? अब जवाफ खोज्ने बेला भैसकेको छ । यदि त्यसो होइन भने माडी छिर्ने धेरैजसो यात्रुलाई अपराधीझैँ ठान्ने त्यस्ता गलत मानसिकता भएका सैनिकहरुलाई मानिससँगको सम्बन्धका बारेमा पनि तालिम दिन आवश्यक छ । यिनका सीमाक्षेत्रहरुमा गाउँलेहरुले गल्ती गर्न गएको झैँ मान्छन् कि क्या हो ? कर साप्, अब यिनीहरुका सोचाइमा परिवर्तन खोज्नु अति आवश्यक भएको छ । अघिल्ला पुस्ताका मानिसले मात्र निकुञ्जमा यस्तो व्यवहार सहन सक्थे होलान्, तर अब समय त्यस्तो छैन । यी र यस्तै कुराहरुलाई मनन् गरी वन रक्षक सैनिकहरुलाई अब वन रक्षक र निकुञ्जआसपासका मानिसबीचको सम्बन्ध बारेको पाठ पढाउन आवश्यक छ, कर साप् ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई चौँथो पटक संशोधन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रहरु वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्र छुट्याई सो क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाकै सहभागितामा आवश्यक पर्ने महसुस गरी स्थानीय जनतालाई संरक्षणमा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने अठोट गरिसकेको छ । त्यसैले, वनजंगलको संरक्षण तथा विकासमा स्थानीय जनताको ठूलो भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा निकुञ्ज रक्षक सैनिक जवानले बुभ्mन जरूरी छ र आफूसँग भएको अधिकारको सही सदुपयोग सही ठाउँमा गर्न आवश्यक छ । तपाईंका जवानहरुलाई यो कुरा समयमै सिकाउन प¥यो, कर साप् ।
“संरक्षणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुसँग सकेसम्म घनिष्ट रुपले सम्पर्क तथा समन्वय गरी प्रकृति संरक्षण, संवद्र्धन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिने छ ।” कुनै पनि वन रक्षक सैनिक जवानहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको यो नीतिप्रति जानकार भएको जस्तो देखिँदैन । हुन त, निकुञ्ज रक्षक सैनिकको व्यवहार र क्रियाकलापप्रति यसअघि पनि पटकपटक प्रश्न उठेर सुधारको आशा गरिएकै हो, तैपनि उनीहरु व्यवहारमै सुध्रिएको महसुस आजसम्म पनि गर्न सकिएको छैन र व्यवहारतः सैनिक जवान सुध्रिएको महसुुस गर्न अझै कति समय कुर्न पर्ने हो, थाहा छैन ।
कर साप्, तपाईंका जवानलाई भन्दिनुहोस् कि निकुञ्जको माया तपाईंका जवानलाई भन्दा हामी माडीवासीलाई धेरै छ । हामीले निकुञ्जलाई माया गरेरै दुई–चार पुस्ता बिताइसकेका छौँ । हामी बुझ्ने भएदेखि नै निकुञ्जलाई माया गर्दै हुर्किरहेका छौँ । दुई मिटर परको दूरी नदेखिने मोडमा समेत हर्न बजाउन नपाइने निकुञ्जको यस्तो नियमको पनि हामीले कडाइका साथ पालना गरेकै छौँ । हर्न बजाउँदा तर्सने जंगली जनावर गोली पड्काउदा चाहिँ किन नतर्सने होलान् ? पारसले गोली पड्काउँदा नतर्सने निकुञ्जका जनावर हाम्रो गाडीको हर्नबाट तर्सने यो कस्तो मान्यता हो ? जे होस्, हामी चुपचाप निकुञ्जको नियम मान्दै आइरहेकै छौँ । निकुञ्जको नियम मान्दै आइरहेकोमा न कुनै हर्ष छ, न त कुनै विस्मात् नै ।चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा, पाटेबाघ, गौरीगाई, भालु, चितुवा, रतुवा, चित्तल, लगुना, जरायो, चौसिंगे, रेसस बाँदर र लंगुरजस्ता जंगली जनावरहरु पाइन्छन् । यसैगरी घडियाल गोही, मगर गोही, अजिंगरलगायत विभिन्न जातका चराचुरूंगी र कीरा–फट्याङ्ग्रा पनि यस निकुञ्जमा देख्न सकिन्छ । लगभग ६८ भन्दा बढी ठूला जातको स्तनधारी जन्तु, ५४४ भन्दा बढी जातका चराचुरूंगीहरु र करिब ५५ जातका माछा तथा घस्रने र हिँड्ने जनावरहरु यस निकुञ्जमा रहेका कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यिनै प्राकृतिक मह¤वका वस्तुहरुको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी सन् १९८४ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको हो । मैले यसअघि नै एउटा कुरा धेरै ठाउँमा उठाइसकेको छु र आज पनि त्यही कुरालाई दोहो¥याउन चाहन्छु– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वसम्पदा सूचीमा परेको कारण राष्ट्रियस्तरमा त फाइदा पुगेको होला, तर माडीवासीका लागि भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अभिशाप नै सावित भएको छ ।